I-SAUDIA ithweswe isithsaba yeyona nkampani yeenqwelo moya iphucukileyo kwihlabathi ngo-2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-SAUDIA ithweswe isithsaba yeyona nkampani yeenqwelo moya iphucukileyo kwihlabathi ngo-2021
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-SAUDIA yazise ngothotho lweemveliso ezintsha kunye nezinto eziphuculweyo ezikhoyo, ihlaziya amava eendwendwe. Amanyathelo ngamanyathelo abandakanya utyikityo lwe-Chef-on-board kwivenkile yokutya; dine-on-demand; ukuphuculwa konxibelelwano lwe-intanethi; izicwangciso zemiyalezo yokuncoma kuzo zonke iikhabhathi; kunye neqonga elitsha lokuzonwabisa.
I-airline iphumelele ibhaso le-Skytrax okwesibini kwiminyaka emine kwaye iyaqhubeka nokunyuka kwayo.
I-SAUDIA inyusa amabala angama-26; ukuphuculwa okungama-55% kubume bayo ngokubanzi beSkytrax beenqwelo moya zehlabathi.
Amabhaso aqinisekisa ubume beenqwelomoya njengenqwelomoya opheleleyo, ehlaziya rhoqo inkonzo yayo ebhodini kunye nomnikelo wokutya.
I-Skytrax ibhengeze namhlanje ukuba i-SAUDIA yeyona Ndiza yeHlabathi iphuculiweyo ye-2021. Eli lityeli lesibini i-SAUDIA iphumelela eli bhaso ukusukela ngo-2017.nd ukuya 51st isikhundla, ukuphuculwa okungama-40%. Kulo nyaka, nangona kunjalo, i-SAUDIA iphuculwe nge-55% emangalisayo kwaye ngoku ingama-26 ISkytrax Uhlobo lweenqwelo moya zehlabathi.
Ukunikwa eli wonga lokuwongwa kubonisa ukuzinikezela kumgangatho kunye nokuphuculwa kokusebenza kwiindidi zamabhaso ahlukeneyo kubandakanya abasebenzi bekhabhathi, ukutya kunye nesiselo, ukonwatyiswa kwinqwelomoya kunye nokunye.
The ISkytrax Ibhaso liza njengenye inqanaba elibalulekileyo I-SAUDIAUtshintsho oluqhubekayo olukhokelele kwamanye amabhaso kunye nokuqwalaselwa. Amanyathelo okhuseleko kwimpilo yenqwelomoya yenqwelomoya ukuqinisekisa ukhuseleko lwabakhweli ngexesha lobhubhane we-COVID-19 atsale umdla kwihlabathi liphela.
Ngothungelwano lwendlela olungaphezulu kweendawo ezingama-95 kunye nenqwelomoya yeenqwelo moya eziyi-145- ezisebenza kwezona zithuthi zincinci emhlabeni - iSAUDIA isendleleni ephezulu yokukhula okuqhubekayo kwiimarike zamanye amazwe.
I-Saudi Arabia Airlines UMlawuli-Jikelele, oHloniphekileyo Eng. U-Ibrahim Alomar uthe, “Kuliwonga ukufumana eli bhaso egameni leqela lonke le-SAUDIA elibonakalise ukuzibophelela okubalaseleyo ekulandeleni imigangatho ephezulu kwihlabathi jikelele - ukusuka kwezempilo nokhuseleko ukuya kwimveliso nakumava. Ndinqwenela ukuvakalisa umbulelo ongazenzisiyo kunye nombulelo kuMgcini weeMosque eziBini eziNgcwele, uKing Salman bin Abdulaziz, kunye neRoyal Highness yakhe iNkosana u-Mohamed bin Salman ngenkxaso yabo eqhubekayo kwi-SAUDIA, umphathi weflegi yoBukumkani. Ndiyavuyisana noSihlalo we-SAUDIA oHloniphekileyo u-Eng. USaleh Al Jasser kunye neBhodi yabaLawuli iyonke ngale mpumelelo. ”